Akuyona into yokuba phakathi kwabasetyhini, kunzima ukubeka ubunzima obunzima kunomntu oyintanda. Kuninzi kule ngxaki kuxhomekeke kwindlela olahlekelwe ngayo isisindo. Ukuba ukulahlekelwa isisindo kwakungxamisekileyo, ukuba ulahlekelwa isisindo emva kokubeleka, ukuba ubunzima buncitshiswe ngenxa yokusebenza komzimba: inkqubo iya kuba yinto eyahlukileyo.
Kwimeko apho uphonsa ama-pounds angaphezu kwee-pounds, kwakungenangqiqo, ubunzima abuyi kubuyiselwa. Umzimba uphinde wakhiwe, kuba ukulahlekelwa ubunzima akuzukufumana ubuhle obubonakalayo kuphela, kodwa nempilo. Ukuhamba ngaphandle kokuphefumula, ithuba lokuthatha inxaxheba kwimidlalo esebenzayo kwimvelo - amaninzi amaninzi abonakalisiwe emva kokuwa kweekhilogram. Ukuze uxhase le ntlupheko yokukhulula kunye nenkululeko, uhambelane nokutya okucwangcisiweyo kunye nokuzilolonga rhoqo.
Into ebaluleke kunayo yonke ukugcina ubunzima behlile, ukuba ukutya kunye nemikhwa yokuphila ihluke kakhulu endleleni yokuphila. Imikhosi emininzi ngexesha leeholide, ukuya kwiibabs kunye nabahlobo - ayinalo inxaxheba kuyo yonke into yokumisela ukutya okunomsoco. Ukuba awukwazi ukuphepha iiholide ezinjalo ngandlela-thile, uzama ukutya iziqhamo kunye nama-salads aphantsi, ungasebenzisa inyama encinane kwisaladi eshushu. Utywala ngeeholide ezinjalo, kwakhona, khetha ngokucophelela. Ngokufanelekileyo, iwayini elimhlophe okanye elomileyo liya kutshabalala. Kodwa kwi-vodka kunye nobhiya kuyimfuneko ukulahla ngonaphakade.
Kwakhona, jonga ngokucophelela ukutya kwakho kwiindawo zokungcebeleka nakumazwe atshisayo kwiholide. I-buffet e-hotele yenzelwe ukuba ukwazi ukwazisa ububele, kwaye ufuna ukubuyela kubo ngokuphindaphindiweyo. Ngoko ke, nabo baye banquma ukuba baya kudla iincinci ezincinci, ukusuka kwintsimi yezidlo ezingaphandle kwezilwandle baphulukana neentloko zabo. Thatha wena ngesandla uze uqaphele izitya zemifuno, abagcini nje ukunika amandla, kodwa banokuvakalelwa. Ewe, emva komso okanye ekuhambeni kwemini okanye ukuqhuba ezinye izivivinyo emoyeni omtsha.
Ukuba unako ukutya ngokulinganisela imihla ngemihla, ngoko unako ukugcina ubunzima obunzima. Kubantu abangenawo amandla okwaneleyo, kuya kufuneka bafike ngemithetho emitsha yendlela yabo yobomi. Oku kungaba ngumgaqo oqhelekileyo weplate. Qalisa kakhulu. Yidla yonke into enqwenelekayo intliziyo yakho, kodwa ngeemeko enye, ukwahlula isabelo kabini. Ukuba ujwayele ukutya indebe enkulu yeladidi, ngoku ke udla isiqingatha.
Ukutya okufanelekileyo kumntu osebenzayo kufuneka kube njengendlela eyahlukeneyo. Kukholelwa ukuba isiqingatha seplati kufuneka sithathwe ngemifuno okanye izitya zokutya. Isiqingatha sesibini sifanele sihlulwe sibe ngamacandelo amabini, isahlulo esizaliswe ngokutya kwamaprotheni. Ewe, kunye nekota zizalise i-carbohydrates. Oku kufuneka kube ngumxhesho ofanelekileyo kulabo ababukele impilo yabo.
Masithethe ngezenzo zakho zomzimba. Indlela efikeleleke kakhulu yokuthwala imihla ngemihla ihamba okanye isebenza. Yeka ukusebenzisa i-elevator nebhasi njengendlela yokuthutha, ngoko unokufumana ixesha leeklasi. Ngokuqhelekileyo ukuhamba epakini, ukuhamba kusebenza ngokukodwa emoyeni omtsha. Ukuqhuba akuyimfuneko ukuqhuba yonke imihla. Kuya kwanele ukufumana ixesha lomzuzu omashumi amane uhamba kathathu ngeveki.
Ngamanye amaxesha kumzabalazo weekhilogram unceda ukukhulula iintsuku. Ukuba kungekudala kwenzeka ukuba uvumelekile kakhulu, uze ulungiselele ukukhulula olunye usuku. Indlela elula ukuyenza usuku lokukhulula ubisi okanye i-kefir. Emva kwaloo mini emzimbeni kubonakala ukukhanya, kwaye iikhilogram eziqokelelwe ngexesha lomthendeleko ziya kuhamba ngokwazo.
Khumbula ukuba into ebaluleke kakhulu ayikuphela kokuchitha iikhalori ezingaphezulu kunokuba uyisebenzise, ​​kodwa ukuguqula indlela yobomi kanye kunye.
Imithetho yokondla yeeklasi zengqondo
Ukukhetha ibhayisekile kwintombazana
Ukuzivocavoca, umzimbaflex, ukufaneleka emzimbeni
Ubuncwane obunqambileyo kunye nemifino
Ukukhwabanisa kweFrench French 2016, ifoto yesona sefestile-ifanisi
Izindebe zomlomo: izixhobo eziqhelekileyo zonyango
Indlela yokugqoka i-stylishly ebusika, ifudumele kwaye ingabizi
Amaffleji anama-peaches kunye ne-icing creamy
Sebenza ekhaya: i-pros and cons